Diyaarad siday Qamri farabadan oo kasoo caga dhigatay Garoonka Aadan Cadde iyo Laamaha amaanka oo gacanta ku dhigay - Wargeyska Faafiye
Diyaarad siday Qamri farabadan oo kasoo caga dhigatay Garoonka Aadan Cadde iyo Laamaha amaanka oo gacanta ku dhigay
Wararka naga soo gaaraya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada amaanka ee garoonka ay qabteen diyaarad ay saarnaayeen waxyaabaha maanka dooriya.
Laamaha ammaanka Dowladda Somaliya ee ka hawlgala Garoonka Aadan Cadde, ayaa waxa ay hadda wadaan baaritaano ay ku xaqiijinayaan diyaaradda laga lee yahay dalka Kenya ee Maandooriyaha waday, mana jirin wax rakaab ah oo saarnaa Diyaaradaasi markii laga reebo Maandooriyaha ay waday.
Sidoo kale, waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in diyaaraddu ay qamriga u siday Shirkadda SKA, oo xilligaan gacanta ku heysa qaybta shidaalka ee Garoonka Aadan Cadde, horeyna u maamuli jirtay Garoonka oo idil.
Waxaa hadda garoonka ku sugan taliyaha ciidamada nabad sugida iyo taliyaha ciidamada amaanka ee garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale taliyaha waaxda socdaalka ee dowlada Soomaaliya. Ciidamada ayaana baaritaan ku haya diyaaradaasi.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan la ogeyn tallaabada ay Dowladda Somaliya ka qaadi doonto diyaaradda qamriga keentay dalka iyo weliba Shirkadda SKA, oo laga lee yahay dalka Koonfur Afrika.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDjibouti: Afhayeenka Mucaaradka oo la Xiray.Qodobadii Looga hadley shirka LondonFaahfaahin: Ismiidaamintii Afgooyeorod yahanka Pistorious oo shan sano oo xariga lagu xukumayMadaxweynaha Soomaaliya oo booqday Beledweyne.